IDESIKA YEPHULI YODIBANISO OLUBONAKALISIWEYO (IINKONZO KUNYE NENGXELO) - AMACHIBI OKUDADA
Eyona amachibi Okudada Ideski yePhuli yoDibaniso oluBonakalisiweyo (Iinkonzo kunye neNgxelo)
Ideski yePhuli yoDibaniso oluBonakalisiweyo (Iinkonzo kunye neNgxelo)
Nasi isikhokelo sedrafti yokuyila iphuli edityanisiweyo kubandakanya nokuba yintoni, ukulunga kunye nokubi, iindleko kunye neengcebiso zokubonisa kwakhona. Umdibaniso obonakalisiweyo lunyango lomphezulu wokuhombisa, zombini ezifikelelekayo kunye nesitayile sokwenza iiphuli zamachibi asekhaya. Olu hlobo lobuso bekhonkrithi luye lwajikeleza ukusukela nge-1900s kwaye ngoku luya kuthandwa kwakhona.
Ubuhle obufihliweyo bomdibaniselwano obuyiyo buyenza ibe nomtsalane, yahluke, kwaye yangoku ngokusebenzisa ilitye lendalo eligcwalisa uluhlu olubanzi loyilo lwasekhaya kunye nezitayile.
Ukudibanisa umndilili oveziweyo kwenza ukuba indawo yokuhlala iphuli yomelele kakhulu, inqabile kwiskid kwaye kulula ukuyigcina icocekile.
Yintoni ebonakalisiweyo kuMdibaniso wePhuli yePhuli
Ukubonakaliswa kweNgcaciso yeDikki yoDibaniso oluDibeneyo
Ukubonakaliswa kweNdawo yePhuli yePhuli
Ukuphinda ubuyisele kwakhona i-Deck yePhuli yePhuli
Umdibaniso obonakalisiweyo wenziwe ngokukhupha umaleko ongaphezulu wangaphandle wesamente ukuze ubhentsise umyinge wokuhombisa omdaka kumxube wekhonkrithi.
Ngoobani abangabafazi bakaDonald Trump
Ukufezekisa olu hlobo lonyango lomphezulu, abagcini bemichiza basetyenziswa kumphezulu okanye ukuhlamba uluhlu oluphezulu ngobuchule bokuhlamba amanzi.
Umdibaniso unokulunga okanye urhabaxa kwaye izihlanganisi eziqhelekileyo ezisetyenziswa kumanqwanqwa echibini zibandakanya amatye endalo okuhombisa, igrabile, ilitye elityumkileyo, ubuhlalu beglasi, kunye namatye amatye.
Iskimu sombala womhlaba ocacileyo ohlanganisiweyo ubukhulu becala sixhomekeke kuhlobo lwamatye okuhombisa asetyenzisiweyo kunye nemvelaphi yawo. Izinto eziphambili ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha umndilili zezi zilandelayo:
Ubungakanani kunye nokubekwa
I-Element kunye nendlela yokuvezwa
Iindleko kunye nokuFumaneka
Ndwendwela eli phepha ukubona ezinye Umgangatho wamachibi endalo ezinye iindlela.
Imbonakalo enomtsalane -Idreyini yamachibi edityanisiweyo edityanisiweyo lukhetho lokuhombisa kwiipatios ezisemva kwendlu kuba zinokwenzeka kwaye zinokudibanisa kakuhle kwaye zitshatise nasiphi na isikimu yoyilo lwasekhaya. Inokunyusa kwakhona isibheno sokunqanda ikhaya lakho ngenkangeleko yalo eyahlukileyo nenobuhle. Funda ngakumbi malunga kutyhilwa iipatiyo ezihlanganisiweyo Apha.
Uninzi lweendlela zoyilo ezahlukeneyo -Kukho iintlobo ngeentlobo kukhetho loyilo ezinje ngemilo, ubungakanani, umbala kwaye zinokudityaniswa kunye nolunye unyango lomphezulu wokuhombisa olufana nokudibanisa ikhonkrithi enamabala kunye nomda obunjiweyo okanye obhaliweyo okanye ukuwudibanisa nembala eyogqunyelelweyo okanye iipateni ezikroliweyo.
Izinto ezinokuhlala kumgangatho wamachibi -Ukubonakaliswa kweAggregate kuhlala ixesha elide ngenxa yentsulungeko yekhonkrithi. Olu hlobo lonyango lomphezulu luya kubonelela ngokusebenza kakuhle okuya kuhlala ixesha elide.
Ulungiso olungcono lwesiliphu - Umdibaniso oveziweyo kumgangatho wedike uyamelana nesiliphu ngakumbi kwiimeko ezimanzi. Ikwagcina kakuhle ukugcwala kwethrafikhi ngenxa yokuthambeka komphezulu kunye nokuthungwa kwayo ngaphandle kokonakalisa imbonakalo yayo yokuhombisa.
Kupholile ngeenyawo Olunye olona mgangatho ubalaseleyo wokudityaniswa komgangatho kumgangatho wephuli kukukwazi ukumelana nokuvezwa kwazo zonke izinto kunye nemozulu embi. Inesakhono sokubonisa ubushushu obwenza ukuba bube lula ngakumbi kwiinyawo ezingenanto.
Ukugcinwa okuphantsi -Ulondolozo lomdibaniso ovezelweyo kumgangatho wedike lolwandle lumodareyithi ukuya ezantsi njengoko lufuna kuphela ukucocwa ngamanye amaxesha ngamanzi kunye nokutywinwa kwakhona kweminyaka emithathu ukuya kwemihlanu ukhuseleko kunye nokugcina ukubonakala kwalo kubengezela.
Amaxabiso asezantsi Ukufikeleleka, kokusebenzisa umndilili oveziweyo kumgangatho wedama yinto enye abanini khaya abayifumanayo ingabizi mali ngenxa yenkqubo elula yokufaka kunye neendleko ezifanelekileyo; ukanti siphumelele kwiziphumo ezinomdla nezintle.
Izipho zemithi zeminyaka emi-5
Ifuna ufakelo lobungcali -Ukufakwa kwezinto ezidityanisiweyo kufuna ukuba umntu enze umsebenzi kwaye awenze ngokufanelekileyo. Qiniseka ukuba awusebenzisi nabantu abangafundanga nabangenamava.
Kuya kufuneka usebenzise uhlobo olulungileyo lwamatye - Izinto ezikumgangatho ophantsi zinokuthambekela ekonakaleni ngakumbi amatye okuhombisa akumaleko aphezulu ngenxa yokuvezwa. Yiyo loo nto abaninimzi kufuneka baqinisekise ukuba izixhobo ezisetyenzisiweyo zikumgangatho ophezulu.
Kunzima ukulungisa - Kunzima ukuyilungisa, ngakumbi ukulungiswa kweentanda kuba ukudibanisa umphezulu oxutywe nawo wonke umhlaba kuya kuba nzima ukuwuthelekisa.
Kunzima ukuyicoca -Nangona ulondolozo lukwicala eliphakathi ukuya kwelisezantsi, kunokuba ngumceli mngeni ekucoceni nasekulondolozeni umndilili ocacileyo ngakumbi xa ubumdaka buxinene phakathi kwamalungu afumanekileyo.
Iimfuno zokucokiswa -Kwanaxa unikwe ixesha elide lobomi, ukudityaniswa okuveziweyo kuya kusadinga ukucokiswa kwaye kuphinde kuvuselelwe ekugqibeleni. Jonga uluhlu lwethu lwe iintlobo zamachibi ezigqityiweyo Apha.
Amaxabiso e-aggregate ye-pool deck ixhomekeke kwezi zinto zilandelayo:
Iimbono zesipho ku-sister-in-law
Indawo yepropathi (indawo elizweni)
Ubungakanani bephuli kumgangatho
Uhlobo lwezinto ezinokusetyenziselwa ukudityaniswa.
I-avareji yedreyini yamachibi edibeneyo Ixabiso lempahla yendalo ngeenyawo zesikwere:
Izixhobo zoMgangatho oSisiseko-US $ 1.26 ukuya kwi-1.35
Izinto ezingcono zoMgangatho- iUS $ 1.48 ukuya kwi-1.71 yeedola
Ezona zixhobo zibalaseleyo zoMgangatho- US $ 2.12 ukuya kwi- $ 2.66
I-avareji yeephuli zeephuli zokufaka iindleko zokufaka ngenyawo ngalinye lesikwere:
Ukufakwa komgangatho osisiseko- iUS $ 5.63 ukuya kwi-5.71 yeedola
Ukufakwa komgangatho ongcono- iUS $ 5.85 ukuya kwi- $ 6.89
Ukufakwa komgangatho ogqwesileyo- I-US $ 7.02 ukuya kwi-7.20 yeedola
Umndilili wamanqwanqwa okudibanisa amachibi ewonke kwiindleko zenyawo nganye:
Isiseko- iUS $ 6.97
Ngcono- i-US $ 7.97
Eyona ilungileyo- iUS $ 9.50
Xa kuvuselelwa kwakhona iphuli yedreyini yamachibi, enye indlela yokwenza njalo kukusebenzisa isambatho sokutshiza ngamachaphaza emibala eyahlukileyo okanye efanayo kumdibaniso ocacileyo wokuqala. Enye indlela yokufaka isambatho se-epoxy esidityaniswe namatye okuhombisa kumgangatho wedama okhoyo.
Ukuba isamente engaphantsi komndilili ocacileyo ikwimeko entle, kunokwenzeka ukuba yalekwe ngaphezulu. Ukujonga imeko yesamente, sicebisa ukuba nenxalenye encinci yedreyini yakho yokuhlanjwa koxinzelelo malunga ne-3500 psi.
Ukuba eli xabiso lokuhlamba uxinzelelo alibangeli monakalo mkhulu kwikhonkrithi kwaye kuphela ziiyunithi ezimbalwa eziphumayo, emva koko inkqubo yokugquma iya kuqhubeka.
Qala ngokufaka i-degreaser usebenzisa isitshizi sempompo ukususa ioyile kwaye emva koko ubrashe kwi-degreaser nge-nylon bristle broom; linda imizuzu eli-10 ukuya kweli-15 ngaphambi kokuba uhlambe umphezulu ngoxinzelelo lwewasha, uqiniseke ukuba umphezulu ukhululekile ngokupheleleyo ekungcoleni nakwioyile.
Isinyathelo esilandelayo kukuba i-acid-etch ebusweni kwaye ngokukhawuleza uhlambulule umphezulu ngokucokisekileyo-ungayivumeli ukuba yome phezu komhlaba ukwenzela ukukhusela i-asidi ekuphenduleni kwikhonkrithi ebangela ukuba ifilimu ivelise imveliso. Lo mboniso bhanya-bhanya uya kunciphisa ukubopha phakathi kokugqunyelelwa kunye nomphezulu wekhonkrithi.
Emva kokuba amanzi aphezu komhlaba omile, xuba isigqubuthelo esiguquliweyo sepolymer kulungelelwaniso olunamanzi kwaye ulisebenzise ngesiponji ukuzalisa izithuba eziphakathi kwezihlanganisi eziveziweyo.
Vumela oku kunyanga usuku kwaye usebenzise idyasi yokulinganisa okanye idyasi yesiponji, oku kuya kuba kukulungiselela umphezulu wokugalelwa ukufafazwa okanye idyasi. Olu hlobo lokubonisa kwakhona alukhuthazwanga kwimiphezulu ene-epoxy edityanisiweyo.
eyona ndoda imiqolomba imibono
nxiba ukuya emtshatweni
iqela lothethathethwano enkosi amanqaku
amakhonkco othembiso lwesiko kwizibini ezitshatileyo
isipho sesikhumbuzo sesilivere kuye